China Iine PCBA ndiro inokwira chikamu vagadziri uye vanotengesa | Chapman
✭ Ichi chikamu chepurasitiki chinoshandiswa kugadzirisa PCBA bhodhi, kuitira kuti PCBA igare yakaenzana uye ive nechokwadi chekugadzikana kwechiratidzo chekutumira. Zvinodikanwa zveichi chikamu chepurasitiki chakakwirira kwazvo, uye kunyatsoita kwezvikamu zvechigadzirwa chepurasitiki chinofanira kunge chiri mukati me0.02mm. Nekudaro, kana nzvimbo dzinoverengeka dzekubatana dzePCBA dzakagadziriswa, chigadzirwa hachikwanisi kuve chakakomberedzwa, uye chakuvhuvhu chinofanira kugadzirwa uye kugadzirwa nenzira yeSlider
✭ Iyo yepamusoro tembiricha inoshingirira PC zvinhu zvinoshandiswa mune ino epurasitiki zvinhu chinhu chinowanzo shandiswa zvinhu zvemota mwenje. Ichi chishandiso chine zvakanakira diki deformation, kugadzikana kwakanaka, kwakanyanya kupisa tembiricha uye kutonhora kuramba.
✭ Iyi seti yeforoma inotora iyo HASCO standard. Iyo Core zvinhu ndeye 1.2343 yakaoma simbi. The Foroma mamiriro iri yakaoma kunzwisisa mamiriro, vanofanira kushandisa exchangeable muwedzero kugadzirwa mana dzakasiyana zvikamu. Icho chigadzirwa chigadzirwa iPC, uye pamusoro panofanirwa kuve chiPolish 600. Chigadzirwa saizi kunyatso kudikanwa kuri +/- 0.02. Iyo nguva yekuendesa ndiyo mazuva makumi matatu nemasere, uye jekiseni iri 27 masekondi. Iyo fomu yakaedzwa kaviri chete, uye mutengi akatikumbira kuronga kutumira kunze kuGerman jekiseni kuumbwa fekitori.
Muforoma NO. CPM-191018
Zvinyorwa zvePurasitiki PC
Chikamu uremu 1.5 g
Chikamu chemazana 32.00 X 18.50 X 18.1 mm
Saizi yekukura 296 X 346 X 326 mm
Mould Zita Angle buffer
Muforoma mhango 1 * 2 (Shandisa inochinjika yekuisa kuti uwane zvikamu zvina)
Mumhanyi anomhanya inotonhora yeSide gedhi
Mould Material 1.2343 / 1.2312 / 1.2767
Lead Nguva Mazuva makumi matatu nemasere
Muforoma Kutenderera Nguva: 27's
Iyi epurasitiki ganda chikamu chinonyanya kushandiswa seye switch switch mumotokari yekufambisa system. Iyo switch switch haifanirwe kunge yakaremara kana saizi iri kunze kwekushivirira, uye izvo zvinhu zvinofanirwa kunge zvisina moto uye yakanyanya kupisa tembiricha. Ita shuwa kuti redunhu redu bhodhi rakagadzikana uye hazvisi nyore kufamba mukati.
Zvisinei nechero wedunhu bhodhi yekugadzirisa bhokisi, mhando yeedu epurasitiki casing yakanaka kwazvo. Tichaita ongororo uye ongororo zvichibva neiyo 3D shell yaunopa. Yedu yehunyanzvi timu inokwanisa kupa masevhisi ekugadzirisa zvigadzirwa. Kuburikidza neyekutanga tekinoroji kuongororwa, isu tinogona kuve nechokwadi chekuti zuva redu rekutakura uye mhando zvakakwana uye zvakapedzwa zvakanaka.
Pashure: Mafirita emafuta Mafuta epurasitiki
Zvadaro: 7day epurasitiki piritsi bhokisi
Bank kadhi kadhi Pos muchina